Archive du 20200519
Miha miparitaka ny valanaretina Tafiditry ny Coronavirus i Mahajanga
Miisa 18 ny trangana coronavirus notaterina omaly, izay vokatry ny fitiliana natao ny 17 mey tamin’ny 8 ora ka hatramin’ny 6 ora hariva.
Mihafamafana ny raharaha Nampanantsoina ny masoivoho Frantsay
Nampanantsoin’ny Minisiteran’ny raharaharaham-bahiny ny Masoivoho Frantsay eto Madagasikara Christophe Bouchard omaly 18 jolay.
Institut Pasteur de Madagascar Horoahin’ny fanjakana Malagasy ?
Mampiavaka ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina ny hoe hanangana zavatra goavana, ary efa maro ireo noresahina, toy ilay famokarana ethanol any Ambilobe, ny orinasa goavana famokarana simenitra,..
Kabarin’ny filoha manaraka Azo sary an-tsaina sahady
Efa hampoizina aloha izany fa mbola hiampy 15 andro indray izao 15 andro lalovantsika ato anaty ahamehana ara-pahasalamana eto Madagasikara izao. Fenitra rahateo ny hoe 90 andro eo no faharetan’izany ao amina firenena iray.
Fahasahian’ny filoha Frantsay Ho voatohitry ny filoha Malagasy ve ?
Mifoha indray moa amin’izao fotoana izao ny resaka nosy manodidina an’I Madagasikara. Isan’ny mampametra-panontaniana ny maro etsy an-kilan’izay ny tena fipetraky ny fanjakana Malagasy sy ny Frantsay.
Vondrona parlemantera GPR Mitaky fampidinana ny vidin-tsolika
Midina efa ho roa volana ny vidin-tsolika maneran-tany kenefa ny eto tsy midina, ka takianay amin’ny fanjakana no hijerena faran’izay malaky momba izay, hoy ireo
Lapan’ny tanànan’Analakely Nilomanosana vehivavy iray ilay rano haingon-tanàna
Tena mafy ny fiainana. Manampy izany ny fahasahiranana ateraky ny fihobohana hany ka maro ireo tsy miverina intsony ny sainy na manaotao foana mihitsy.
Fitaterana olona an-tsokosoko Fiara iray karohana fatratra ao Antsirabe
Fiara Camion Plateau miloko mena mitondra ny laharana 8040 TAE no nanaovan’ny mpitandro filaminana fampikarohana nanomboka omaly.
Antsiranana Bar tsy manara-dalàna maro no nakatona
Na dia mbola tsy ahitana olona mitondra ny tsimok’aretina coronavirus aza any amin’ny Faritra DIANA dia efa hentitra sahady ny fanaraha-maso ny
Saritany sy Certificat de situation juridique Dimy minitra dia vonona
Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy io omaly maraina io ny "guichet automatique de certificat de situation juridique et Plan " ho an' ny distrikan` Atsimondrano. Manomboka izao arak'izany,
Port-Bergé Naiditra am-ponja ny tompon’andraikitry ny Jirama
Taorian’ny fanamarinana notanterahin’ny ekipa mpanara-maso eo anivon’ny Jirama dia voamarina fa vola mitentina 170 tapitrisa ariary no voahodikodina tao amin’ny Jirama any Port-Bergé.
Rehefa sahy dia sahy !
Naherihery ny fitenin’ny Filoham-pirenena Malagasy tato ho ato manoloana ny kihana ataona firenena na vondrona firenena.
Fifamoivoizana eto an-drenivohitra Maro ireo sarety tratra tsy nanara-dalàna
Niroso tamin’ny fampanarahan-dalàna ireo sarety mivezivezy eto an-drenivohitra ny kaominina Antananarivo renivohitra,omaly. Lohalaharana tamin’izany ny sarety.
Zotra nasionaly Mangataka fanampiana, hanao hetsika rahampitso
Roa volana katroka tsy niasa, saingy tsy mba nisitraka fanampiana tahaka ny teto an-dRenivohitra ireo mpitatitra amin’ny zotra Nasionaly etsy Andohatapenaka,
Ankazomanga Lehilahy iray sempotra sady torana
Lehilahy iray 62 taona no torana teny anoloan’ny Farmasia Ankazomanga omaly maraina tokony ho tamin’ny 8ora sy sasany. Sempotra ary nikohaka no nahitan’ny olona azy.
Sehatry tsy miankina Avela hiady irery
Mitohy 15 andro ny fahamehana ara-pahasalamana, izany hoe mitohy ny fihibohana tapak'andro. Samy niandry ny fepetra ho an` ny sosialim-bahoaka moa ny olom-pirenena nandritra ny kabarin`ny filoham-pirenena ny alahady lasa teo saingy indrisy.
Distrikan’i Morombe Manjaka ny Dahalo
Vono olona feno habibiana no mahazo ny vahoaka ao amin'ny distrikan’i Morombe rehefa ny fitsarana, ny off-coord na zandarimaria any an-toerana sy ny kaomandin’ny CIRGN Toliara no miray tsikombakomba amin'ny dahalo,
Morondava Tovovavy 19 taona, maty nananton-tena
Tovovavy iray 19 taona, ny faran’ny herinandro teo no hita faty niantona teny ambony manga tao amin’ny fokontany Tsimahavaokely, distrikan’i Morondava. Araka ny vaovao avy amin’ny polisim-pirenena ao Menabe, dia namono tena ity tovovavy ity.
Anosibe Angarangarana Enin-dahy tratra nivarotra rongony
Enin-dahy mpivarotra sy mpanjifa rongony eny amin’ny faritra Anosibe Angarangarana no voasambotry ny polisy misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina etsy Anosy ny alahady 17 mey teo tokony tamin’ny dimy ora maraina.
Fanomezan-danja ny olombelona Takon’ny fihetsiketsehana hatrany
Ny olona no harena, hoy ny lahabolana am-bava any amin’ny faritany izay. Sarotra ho an’ny malagasy matetika, indrindra, ireo manan-katao sy manam-bola ny miheritreritra izany,
Centre Fanantenana Anosizato Hahazo rano fisotro madio
Taorian’ny fanombohan’ny asa fanavaozana ny Centre Fanantenana etsy Anosizato izay nametrahana ireo olona mpatory an-dalana misy ireo zaza
Fizarana fanampiana Mila fanaraha-maso hentitra
Hatramin’izao dia mbola mamboly fahasorenana ho an’ireo mila azy hatrany ny fomba fizarana ireo fanampiana azon’ny fanjakana malagasy natao ho tsinjaraina eny amin’ny fokontany tsirairay avy eny.
Ambatondrazaka Lehilahy iray ahiana ho voan’ny Covid-19
Lehilahy iray 62 taona avy any Toamasina no nanantona ny hopitalibe ao Ambatondrazaka noho ny toe-pahasalamany ahiana ho tratry ny coronavirus. Natoka-monina avy hatrany ao amin’ny Complexe mère et enfant any an-toerana izy io.
Ambatovy Teratany vahiny iray matin’ny Covid-19 ...
Teratany Filipianina iray antsoina hoe Ryan Reyes no re omaly fa nodimandry tao Ambatovy - Toamasina, raha araka ny fampitam-baovao serasera anatin'ny orinasa . Niasa tao amin’ny departemanta “Utilities”
Fomba fiainana Hiova noho ny coronavirus
Mety ho tafiditra ao anatin’ireo aretina hiara-hiaina amin’ny olona eny anivon’ny fiaraha-monina mandavan-taona ny coronavirus amin’ny ankapobeny. Anisan’ ireny ohatra ny tazo, mivalana, gripa madinika….
Serasera mikasika ny CVO Misy lesoka hatrany
Hatramin’ny nampahafantarana azy voalohany indrindra izay efa nampiaiky olona maro fa solafaka avy hatrany satria serasera politika no nialohan’ny